धूलो आँधीबेहरी: कारण, परिणाम। जहाँ धुलो आँधीबेहरी छन्?
यी climatic घटनाहरू पृथ्वीको वातावरण को प्रदूषण एउटा महत्वपूर्ण योगदान बनाउन। यो वैज्ञानिकहरूले चाँडै एक सरल व्याख्या फेला कि धेरै अविश्वसनीय प्राकृतिक घटना को छ।
यी प्रतिकूल climatic घटना - धूलो आँधीबेहरी। तिनीहरू बारे थप जानकारी को लागि निम्न लेखमा छलफल गरिनेछ।
धूल वा बलौटे आँधी - बालुवा र धुलो हावा को एक घटना स्थानान्तरण भारी मात्रा, दृश्यात्मक मा एक तेज गिरावट सँगसँगै। सामान्यतया, यी घटना भूमि मा Originate।
जहाँ हावा धाराहरु सागर मा धूलो को शक्तिशाली बादल ले ग्रह, यस सुखा क्षेत्रहरु। यसबाहेक, मुख्य रूप भूमि मा मानिस एउटा धेरै खतरा प्रतिनिधित्व, तिनीहरूले तैपनि निकै हावा को पारदर्शिता, यसरी गाह्रो ठाउँ बाट सागर को सतह पालन गर्न बनाउन क्षीण।
धूलो बाउल को कारण
सतह पत्र सूक्ष्म कण मा अप खण्डन कारण बलियो सुकाउने माटो गर्न भयानक गर्मी, र त्यसपछि सबै कुरा, माथि बलियो हावा रोजिएको छ।
तर धूलो आँधीबेहरी को जब केही महत्वपूर्ण मान सुरु , हावा गति को भू-भाग र माटो संरचना आधारमा। सबैभन्दा भाग लागि तिनीहरूले दायरा 10-12 m / s मा हावा गति मा सुरु गर्नुहोस्। loess धूलो आँधीबेहरी एउटा कमजोर soils कम्तिमा5m / s पनि 8 m / s, गति मा, गर्मी मा आउँदैन।
आँधीबेहरी को अवधि धेरै दिन मिनेट देखि फरक हुन्छ। अक्सर, समय घण्टामा मापन। उदाहरणका लागि, को क्षेत्र मा को अरल सागर 80 घण्टे आँधी रेकर्ड भएको थियो।
को वर्णन घटना को कारण को लापता पृथ्वीको सतह देखि धूलो खडा गरेपछि केही घण्टा, संभवतः दिनको लागि एक निलम्बित अवस्थामा हावा मा छ। यी अवस्थामा मा, सयौं र किलोमिटर पनि हजारौं मा हावा प्रवाह यसको विशाल आम स्थानान्तरण। स्रोत धूलो देखि लामो दूरी भन्दा हावा द्वारा नामाकरण advective तुवाँलो भनिन्छ। अफ्रीका (उत्तरी क्षेत्रमा) बाट रूस दक्षिणी भाग युरोप र भर हस्तान्तरण गर्ने तुवालो र मध्य पूर्व को ट्रपिकल हावा ठूलो। एक पश्चिमी प्रवाहको अक्सर चीन देखि यस्तो धूलो प्रशान्त तट मा (केन्द्र र उत्तर), र यति मा बनाउन। डी
धूलो आँधीबेहरी को निर्भर रंग को विविधता छ माटो संरचना र रंग। त्यहाँ निम्न रंग मा आँधीबेहरी हो:
कालो (युरोपेली रूस, ओरेनबर्ग क्षेत्र र Bashkortostan को दक्षिणी र दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रहरु को कालो soils);
पहेंलो र खैरो (संयुक्त राज्य अमेरिका र मध्य एशिया को विशिष्ट - loam र बलौटे loam);
अफगानिस्तान र इरानी मरुभूमि को रातो (रातो-रंग फलाम आक्साइड माटो;
सेतो (नुन marshes Kalmykia तुर्कमेनिस्तान केही क्षेत्रमा र वोल्गा क्षेत्र)।
धूलो आँधीबेहरी को घटना ग्रह को विभिन्न ठाउँमा आउँदैन। र वितरण को मुख्य क्षेत्र अर्द्ध छन् मरुभूमि ट्रपिकल र समशीतोष्ण climatic क्षेत्र, र पृथ्वी दुवै hemispheres।
सामान्यतया, शब्द "धूलो आँधी" जब यो loam वा माटो माटो मा हुन्छ प्रयोग गरिन्छ। जब यो बलौटे मरुभूमिमा हुन्छ (जस्तै सहारा, Kyzylkum, Karakum र यति मा।), अनि पनि सानो कण, हावा हावा लाखौं टन र ठूलो कणहरु (बालुवा), पहिले नै शब्द "बालुवाको आँधी" प्रयोग गरिन्छ वहन।
बारम्बार धूलो आँधीबेहरी Balkhash र अरल सागर क्षेत्र (दक्षिणी काजाकिस्तान) मा, काजकस्तान को पश्चिमी भाग मा, कैस्पियन सागर मा, Karakalpakstan र तुर्कमेनिस्तान मा आउँदैन।
जहाँ रूस मा धूलो आँधीबेहरी छन्? अक्सर तिनीहरूले Tuva, Kalmykia मा Astrakhan र बेलग्रेड क्षेत्रहरु, मा, Altai र ट्रांस-Baikal क्षेत्रहरूमा रूपमा साथै आउँदैन। लामो समयसम्म खडेरी को अवधि समयमा, आँधीबेहरी विकास गर्न सक्छौं (प्रत्येक वर्ष होइन) वन-steppe र steppe Crimea मा, चिटा, Buryatia, Tuva, नोवोसिबिर्स्क, ओरेनबर्ग, सामारा, वोरोनिश र Rostov क्षेत्रहरु, क्रास्नोडार र Stavropol क्षेत्र को क्षेत्र, र अरूलाई मा।
अरब सागर मा धूल तुवाँलो को मुख्य स्रोतहरु - मरुभूमिमा छ अरब प्रायद्वीप को र अफ्रीका। यी ठाउँमा कम क्षति इरान गरेको आँधी, पाकिस्तान र भारत ल्याउन।
प्रशान्त महासागर धूलो आँधीबेहरी मा चिनियाँ बोक्न।
धूलो बाउल को पारिस्थितिकी नतिजा
को वर्णन घटना विशाल टिब्बा सार्न र अगाडि एक बाक्लो र उच्च धूलो पर्खाल रूपमा देखा पर्न सक्छ भनेर धूलो को ठूलो रकम हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ (1.6 मी सम्म।)। सहारा मरुभूमि आँधीबेहरी देखि आ "बालुवाको आन्धीबेहेरी", "Khamsin" (मिश्र र इजरायल) र "habub" (सुडान) को रूपमा परिचित छन्। को सहारा आँधीबेहरी मा ज्यादातर को खोक्रो भागमा उत्पन्न र Bodélé अवसाद चक्रवृद्धि माली सीमाहरु माउरिटानिया र अल्जेरिया।
यो विगत 60 वर्ष भन्दा बढी सहारा धूलो आँधीबेहरी संख्या चाड, नाइजेरिया मा माटो को सतह पत्र को मोटाई मा एक धेरै कमी को कारण लगभग 10 पटक वृद्धि उल्लेख गर्नुपर्छ। तुलना लागि यो माउरिटानिया पछिल्लो शताब्दीको 60 का बस दुई धूलो आँधीबेहरी भयो, र अहिले एक वर्ष त्यहाँ 80 आँधीबेहरी मा अवलोकन छ उल्लेख गर्नुपर्छ।
वैज्ञानिकहरू, environmentalists पृथ्वीको सुखा क्षेत्रहरु गर्न अनुतरदायी मनोवृत्ति, विशेष, क्रप परिक्रमा को सिस्टम बेवास्ता, लगातार एक वैश्विक मात्रा मा ग्रह पृथ्वीको अवस्थामा मरुभूमि क्षेत्रमा वृद्धि र जलवायु परिवर्तन गर्न जान्छ भन्ने विश्वास गर्छन्।
धूलो आँधीबेहरी, साथै अन्य धेरै प्राकृतिक घटना ठूलो हानि ल्याउन। यहाँ राहत, microclimate, प्रचलित हावा को दिशा र जमीन सतह नजिकै हावा गति कम र माटो कण को आसंजन वृद्धि गर्न भनेर सम्बन्धित गतिविधिहरु प्रदर्शन - कम गर्न वा भू-भाग विश्लेषण गर्नुपर्छ आफ्नो प्रतिकूल प्रभाव रोक्न क्रममा।
केही गतिविधिहरु पूरा गर्न, हावा को गति कम गर्न। जताततै आश्रय बेल्ट र पखेटा को एक प्रणाली सिर्जना गरियो। माटो कण को वृद्धि आसंजन मा धेरै प्रभाव कुनै-सम्म पाराले जोतेर, stubble बायाँ, बारहमासी घास, बारहमासी घास को स्ट्रिप्स बाली वार्षिक बाली संग interspersed दिनुहोस्।
सबै भन्दा प्रसिद्ध बालुवा र धुलो आँधीबेहरी केही
उदाहरणका लागि, हामी तपाईँलाई धेरै प्रसिद्ध बालुवा र धुलो आँधीबेहरी सूची प्रस्ताव:
525 ई.पू. मा। ई।, Herodotus अनुसार, सहारा मा एक बालुवाको आन्धीबेहेरी समयमा फारसका 50000th सेना राजा Cambyses मृत्यु भयो।
1928 मा युक्रेनमा भयानक हावा 1 लाख वर्ग को एक क्षेत्र देखि Bole 15 लाख। कालो माटो को टन उठाएर। धूलो पनि Carpathians, रोमानिया, र तिनीहरूले बसे जहाँ पोल्याण्ड, मा सारिएको छ जो किमी।
1983 मा, अष्ट्रेलिया मा भिक्टोरिया को राज्य को उत्तर बलियो आँधी मेलबोर्न शहर ढाकिएको छ।
कराची र Baluchistan र सिंध प्रान्त मा 2007 को गर्मी मा त्यहाँ एक मजबूत आँधी र यो पछि भन्ने torrential वर्षा, 200 मान्छे को मृत्यु नेतृत्व गरेको थियो।
मई 2008 मा, मङ्गोलिया कारण एक बालुवा गर्न आँधी 46 मान्छे मारिए।
सेप्टेम्बर 2015 मा एक भयानक "Sharav" (बालुवाको आन्धीबेहेरी) मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाको ठूलो क्षेत्र बह। हार्ड हिट इजरायल, इजिप्ट, प्यालेस्टाइन, लेबनान, जोर्डन, साउदी अरब र सिरिया। त्यहाँ हताहत थिए।
अन्तमा, एक अन्य ग्रहहरूमा धूलो आँधीबेहरी बिट
निम्नानुसार मंगल धूलो आँधीबेहरी आउँदैन। कारण बरफ मोटाइ र न्यानो हावा बीच दक्षिणी ध्रुवीय टोपी ग्रह मंगल को किनारा मा तापमान मा बलियो फरक त्यहाँ बलियो हावा, विशाल रातो-खैरो उठाने धूलो बादल छन्। र यहाँ यसको निहितार्थ हो। वैज्ञानिकहरू मंगल धूलो पार्थिव बादल जस्तै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। वातावरण Heating धूलो द्वारा सौर प्रकाश को अवशोषण मार्फत हुन्छ।
Albino - पशु दुर्लभ तर स्वाभाविक निरन्तर
हिउँ चितुवा - पहाड dweller
डल्फिन - पशु वा व्यावहारिक हुनुको?
Prongs - यो ... किन moose एल्क भनिन्छ?
उहाँले जन्म र जब Bunin मृत्यु भएको थियो? इवान Bunin: जीवनको वर्ष
बच्चाहरु को लागि Thoracic संग्रह खोकी। Thoracic संग्रह 1,2,3,4 खोकी: प्रयोगको लागि निर्देशन
मान्छे कसरी क्यान्सर आफ्नो प्रेम जित्छन्?
किन ढिलाइ महिनावारी छ?
दृश्य - यो ... तिनीहरूको श्रम को दक्षता मा प्रभाव
कार्यपुस्तिका पुन: प्राप्ति गर्दै: यो कसले गर्नु पर्छ?
कीमा बनाएको मासु संग ओवन कोमल बैगुन - नुस्खा